I-2019 #NABShow 4K 4Charity Fun Run Run! - Izindaba ze-NAB Show nge-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » 2019 #NABShow 4K 4Charity Fun Fun Run!
The I-4K 4Chariy Fun Run iba ngomunye wemicimbi “yokushaywa kwasendleleni” yokuxhumana nge-2019 #NABShow. Ukujuluka nokuxhumana ngasikhathi sinye, ngenkathi kusekelwa imbangela enkulu, kuyinto enhle kakhulu inhloso yokuqala kule 2.49-mile run looping ezungeze iSunset Park e-7: 30AM ngoLwesibili, Ephreli 9. Intela yokubhalisa ekhokhiswa intela ye-100% izinzuzo zamantombazane Who Code.
Amantombazane Who Code ihola imizamo yokuvala igebe lobulili ezindaweni zensimu yekhompyutha yesayensi yezobuchwepheshe. Lo mqondo omangalisayo ku-ngokoqobo waqala eminyakeni eyisithupha edlule futhi ufinyelele kumantombazane we-90,000 kuzo zonke izifundazwe ze-50. Wonke ama-alumni abo asekolishi asebekhulile asebekhulile ngezikhathi ze-15 ngokwesilinganiso sikazwelonke kubuchwepheshe besayensi yekhompyutha. Lo msebenzi okhula ngokushesha emnothweni wase-US kulindeleke ukuthi ukhule ngengxenye yesigidi ngonyaka we-2026! Uhlelo oluphelele lwe-Girls Who Code kuzoba ukuqhubeka ukuheha amantombazane e-K-12 ukusiza ukuvala igebe lobulili kubuchwepheshe. Ucwaningo lukhombisa ukuthi izifundazwe eziningi ezweni lonke ziqala ukwenza izifundo ezengeziwe zesayensi yamakhompiyutha ezikoleni eziphakeme, kodwa-ke, awekho amantombazane amaningi kakhulu akhombisa ukuthakasela amakilasi, uma engazange atholakale ekufundweni kwasekuqaleni. Amantombazane Who Code agxile ocwaningweni oluxhasa lo mqondo, wokuthi uma amantombazane ezungezwe abesifazane besayensi yamakhompyutha besebancane, bazokwazi ukwephula izithiyo zendlela yabesilisa ebabazekayo.
Ungaphuthelwa ithuba lokuthola isikhathi sakho sokuvivinya umzimba ngenkathi useViva Vegas. Bhalisela namuhla ngesizathu esihle!
I-4K 4Charity Fun Run: I-4K 4Charity Fun Run ngumdlalo we-4km (2.49-mile) wokugijima nokuhamba owenziwe ngokuhlanganyela ne2019 I-NAB Bonisa eLas Vegas. Lo mcimbi oyingqayizivele unikeza ukubonwa okukhona ngenye indlela enempilo kunethiwekhi yendabuko, ngenkathi kuphakanyiswa imali edingeka kakhulu yezinhlelo ezahlukahlukene zokufaka nokufaka. Umcimbi wenzeka ngoLwesibili, Ephreli 9 e-7: 30 am kanye nokugxupheka ezungeze iSinset Park enhle. Imali yakho yokubhalisa i-100% idonswa intela futhi izinzuzo ngqo Amantombazane Who Code.
Ungaphuthelwa futhi ubhalise manje ngezansi!
Mayelana Amantombazane Who Code
Amantombazane Who Code yinhlangano yomhlaba engenzi inzuzo esebenza ukuvala igebe lobulili kwezobuchwepheshe futhi aguqule isithombe salokho umhleli wohlelo abukeka njengaye futhi akwenzayo. Ngohlelo lwabo lwe-7-week Summer Immersion Programme, uhlelo lweCampus olukhethekile lweviki le-2, ngemuva kwamaClub esikole, Uhlelo lweColle Loops neNew York Times oluthengiswa kakhulu, bahola umnyakazo ukukhuthaza, ukufundisa, nokuhlomisa abesifazane abasebasha nge-computer amakhono wokuphishekela amathuba wekhulu le-21st. Amantombazane Who Code afinyelele kumantombazane e-90,000 kuze kube manje. Ukuze ujoyine inhlangano noma ufunde kabanzi, vakashela girlswhocode.com.
Mayelana I-NAB Bonisa
I-NAB Bonisa, eyabanjwe ngo-Ephreli 6th-11th, i-2019 eLas Vegas, yiyona mboniso enkulu kunazo zonke ye-electronic media ehlanganisa ukudala, ukuphathwa nokulethwa kokuqukethwe kuzo zonke amapulatifomu. Ngabantu abangu-103,000 abavela emazweni we-166 nama-1,700 + umbukiso, I-NAB Bonisa iyindawo yokuthengisa emakethe enkulu yezindaba zedijithali nokuzijabulisa. Ukusuka ekudalweni kuya ekusetshenzisweni, kuwo wonke amapulatifomu amaningi kanye nezizwe ezingenakubalwa, #NABShow I-2019 yisekhaya izixazululo ezidlula ukusabalalisa kwendabuko futhi zamukela ukulethwa kokuqukethwe ezikrinini ezintsha ngezindlela ezintsha.
I-2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa Izindaba I-Broadcast Beat Awards Sakaza i-Beat Magazine Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Umsakazo Wesivumelwano Umhlangano Wokusakaza I-NAB 2015 I-NAB 2016 I-NAB Bonisa I-NAB Bonisa i-2016 imisebenzi ye-nab show I-NAB Bonisa Las Vegas I-NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 nabshow I-National Association of Broadcast Show Show I-World Production Post	2019-03-20
Ngaphambilini: I-FingerWorks ne-neo 360 ku-Present Collaborative Sports Broadcast Solution Solution ku-NAB 2019
Olandelayo: I-Miller ukwethula i-New Product Lineup e-NAB 2019